မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​လာ​ဖို့ ​လူ​တိုင်း​မှာ ​တာ​ဝန်​ရှိ​သည် ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​လာ​ဖို့ ​လူ​တိုင်း​မှာ ​တာ​ဝန်​ရှိ​သည်
​ကျွန်​တော် ​နိုင်​ငံ​ရေး​မ​လုပ်​ခဲ့​သ​လို၊ ​ယ​ခု​အ​ချိန်​အ​ထိ​လည်း ​စိတ်​ဝင်​စား​မှု့​မ​ရှိ​ခဲ့​ပါ​ဘူး. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ကျွန်​တော့်​မှာ ​အ​ဖေ​နှစ်​ယောက်​ရှိ​ပါ​တယ်. ​ပ​ထ​မ​အ​ဖေ​က​တော့ ​ဗိုလ်​ချုပ်​အောင်​ဆန်း​ပါ၊ ​ဒု​တိ​ယ​အ​ဖေ​က​တော့ ​ကျွန်​တော့်​ကို ​မွေး​ထုတ်​ပေး​ခဲ့​တဲ့ ​အ​ဖေ​ပါ. ​ငယ်​ငယ်​က​တည်း​က ​ဗိုလ်​ချုပ်​အောင်​ဆန်း​ရဲ့ ​မိန့်​ခွန်း​တွေ video ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​မြင်​တွေ့​ရ​ရင် ​ရင်​ထဲ​မှာ ​အ​လို​လို​နေ​ရင်း​နဲ့ ​နှ​မျှော​တ​သ​ခြင်း၊ ​ဝမ်း​နည်း​ကြေ​ကွဲ​ခြင်း ​တွေ​အ​ပြင် ​ဈာ​ပ​န ​အ​ခမ်း​အ​နား​ကို ​မြင်​တွေ့​လိုက်​ရ​ရင်​တော့ ​မျက်​ရည်​ပါ ​ဝိုင်း​ခဲ့​မိ​တဲ့​အ​ထိ​ပါ။ ​ဗိုလ်​ချုပ်​အောင်​ဆန်း​ရဲ့ ​စိတ်​ဓါတ်​ဟာ ​ဘယ်​သူ​မှ ​မ​လုပ်​ရဲ​တဲ့ ​မ​လုပ်​နိုင်​တဲ့ ​စိတ်​ဓါတ်​နဲ့ ​သူ့​ရဲ့​အ​သက်​တွေ​ကို ​ပြည်​သူ​တွေ​အ​တွက် ​ပေး​လှူ​ပြီး​တော့ ​လုပ်​ဆောင်​သွား​တာ​ဟာ ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​တွက် ​တစ်​ကယ့်​ကို ​န​မူ​နာ​ယူ​သင့်​တဲ့ ​စိတ်​ဓါတ်​ပါ. ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ကျွန်​တော်​တို့​ကျောင်း​သား ​ဘ​ဝ​တုန်း​က ​ဗိုလ်​ချုပ်​အောင်​ဆန်း​ရဲ့​ပုံ​ကို ​ကျောင်း​တိုင်း​ရဲ့ ​စာ​သင်​ခန်း​ရဲ့​ထိတ်​ဆုံး​မှာ ​ချိတ်​ထား​တတ်​ပါ​တယ်. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​နောက် ​ပိုင်း ​ပြန်​ဖြုတ်​ခိုင်း ​လိုက်​တဲ့​ခ​ဏ​မှာ ​ရင်​ထဲ​မှာ ​စိတ်​မ​ကောင်း​ခြင်း​တွေ ​ဖြစ်​ခဲ့​ဖူး​ပါ​တယ်။
​အ​ခု​ပြော​ချင်​တာ​က​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​ဟာ ​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ​နိုင်​ငံ​ဖြစ်​အောင် ​ကြိုး​စား​နေ​တာ ​တ​ကယ့်​ကို ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ ​ကြီး​တိုး​တက် ​ဖို့​ကြိုး​ပမ်း​နေ​တာ​ဟာ ​ရင်​ထဲ​မှာ ​အ​ရမ်း​ကို ​ကြေ​နပ်​မိ​ပါ​တယ်။ ​နိုင်​ငံ​ခြား​သား​တွေ Burma ​ဆို​တာ​ကို ​မေး​ရင် ​မ​သိ​ပေ​မယ့် Thailand ​ကို​မေး​ရင် ​သိ​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​လို​မျိုး​တွေ​နဲ့ ​နိုင်​ငံ​ခြား​မှာ ​နေ​စဉ် ​မ​ကြာ​ခ​ဏ ​ကိုယ့်​နိုင်​ငံ​အ​ကြောင်း​ပြော​ပြ​မယ်​ဆို​တိုင်း I'm Burma. Do you know my country "Burma" (or) "Myanmar". They answered me Just same answer. NNNNNNNNNNNNN OOOOOOOOO. ​ဒါ​ပါ​ပဲ. ​ကိုယ့်​နိုင်​ငံ​အ​မည်​ကို​တောင်​သူ​တို့ ​မ​သိ​ကြ​တော့. ​နိုင်​ငံ​ရဲ့ ​အ​ခြား ​အ​လှ​အ​ပ​တွေ၊ ​သ​ယံ​ဇာ​တ​ပေါ​ကြောင်း၊ ​အ​ခု​ထိုင်း​မှာ ​တွေ့​မြင်​နေ​ရ​တဲ့ ​သူ​တို့​အ​ဓိ​က​ထား​ရိုက်​တဲ့ ​ရှေး​တုန်း​က ​ဘု​ရား​တွေ​ထက် ​ပို​ရှေး​ကျ​တဲ့ ​ဘု​ရား​ပု​ထိုး​ပေါင်း​များ​စွာ​ရှိ​ကြောင်း ​ပြော​ဖို့ ​နှုတ်​ဆွံ့​အ​သွား​ခဲ့​ရ​ပါ​တယ်။ ​အ​ခု​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ ​နိုင်​ငံ​ဖြစ်​သွား​ခဲ့​ရင်​တော့ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ ​ဆို​တာ​ကို ​နိုင်​ငံ​ခြား​သား​တိုင်း ​သိ​သွား​ကြ​မှာ​ပါ။ ​ဘာ​လို့​လဲ​ဆို​ရင် ​ကျွန်​တော်​တို့ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​သား​တွေ​ဟာ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​သား​တွေ​ထက် ​ဦး​နှောက်​ပိုင်း​ရော၊ ​အ​တွေး​အ​ခေါ်​ပိုင်း​ရော ​သာ​လွန်​တဲ့​အ​ပြင်၊ ​စိတ်​ဓါတ်​ပိုင်း​ပါ ​သာ​လွန်​နေ​တဲ့​အ​တွက်​ပါ။ ​ယ​ခု​လက်​ရှိ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​နှင့် ​အ​ခြား​နိုင်​ငံ​တွေ​မှာ ​လုပ်​နေ​တဲ့​သူ​များ​အား​လုံး​ကို ​တောင်း​ပန်​ချင်​ပါ​တယ်. ​အ​ထူး​သ​ဖြင့် ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​ပေါ့။ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​မှာ ​လုပ်​နေ​တာ ​မြန်​မာ​အ​လုပ်​သ​မား ​သန်း​နဲ့​ချီ​ပြီး​ရှိ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​ဒီ့​အ​လုပ်​သ​မား​များ​အား​လုံး​ကို ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​တော့ ​တစ်​ခု​ပြော​ချင်​ပါ​တယ်. ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ ​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ​နိုင်​ငံ​ဖြစ်​သွား​ခဲ့​ရင်. ​ကို​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​မှာ ​တတ်​ထား​တဲ့ ​ပ​ညာ​ရပ်​တွေ​နဲ့ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​မှာ ​ထပ်​ပြီး​တော့ ​မ​လုပ်​တော့​ပဲ​နဲ့ ​အဲ့​ဒီ့​ပ​ညာ​ရပ်​တွေ​နဲ့ ​မြန်​မာ​ပြည်​တိုး​တက်​အောင် ​ကြိုး​ပမ်း​ပေး​ဖို့​အ​တွက် ​ပြန်​လာ​စေ​ချင်​တာ​ပါ. ​ဒါ​မှ​သာ ​ကျွန်​တော်​တို့​နိုင်​ငံ​ဟာ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​ထက် ​သာ​တဲ့ ​နိုင်​ငံ​တစ်​နိုင်​ငံ​ဖြစ်​လာ​မှာ​ပါ. ​အ​တတ်​ပ​ညာ​ရှင်​အား​လုံး ​ဒီ​မို​က​ရေ​စီ ​နိုင်​ငံ​ဖြစ်​လာ​ပြီ​ဆို​ရင် ​အ​မိ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​မှာ ​ပြန်​လာ​ပြီး ​အ​ကျိုး​ပြု​ပေး​ကြ​ဖို့ ​မေ​တ္တာ​ရပ်​ခံ​ချင်​ပါ​တယ်. ​တ​ရုတ်​နိုင်​ငံ​သား​တွေ​လို ​စိတ်​ဓါတ်​တွေ ​ခိုင်​ခိုင်​မာ​မာ​ထား​ပေး​ပါ. ​တ​ရုတ်​နိုင်​ငံ​က ​ပ​ညာ​ရှင်​များ​ဟာ ​သူ့​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​ဖို့​အ​တွက် ​သူ့​နိုင်​ငံ​မှာ​ပဲ ​အ​လုပ်​လုပ်​ကြ​ပါ​တယ်. ​တစ်​ခြား​နိုင်​ငံ​ကို ​ဘယ်​တော့​မှ ​သွား​ပြီ​မ​လုပ်​ကြ​ပါ​ဘူး. ​ဒါ​ဟာ ​တ​ရုတ်​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​ဖို့​အ​တွက် ​အ​ဓိ​က ​သော့​ချက်​ပါ​ပဲ. ​အဲ့​လို​ပဲ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​သား​များ​လည်း​ပဲ ​တ​ရုတ်​တွေ​လို ​စိတ်​ဓါတ်​ထား​ပြီး ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​ဖို့​အ​တွက် ​ဝိုင်း​ဝန်း​ကြိုး​ပန်း​ပေး​ကြ​ဖို့ ​မေ​တ္တာ​ရပ်​ခံ​ချင်​ပါ​တယ်.
​အ​ခု​ဆ​န္ဒ​မဲ​ပေး​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ​လည်း​ပဲ ​ကျွန်​တော်​တို့​နိုင်​ငံ​တော်​ကို ​တ​ကယ်​တိုး​တက်​အောင် ​လုပ်​ဆောင်​နိုင်​မည့် ​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​ကို ​သေ​ချာ​စဉ်း​စား​ပြီး ​စိတ်​ဓါတ်​ခိုင်​ခိုင်​မာ​မာ​ထား​ရင်း​နဲ့ ​သ​တ္တိ​ရှိ​ရှိ​မဲ​ပေး​ကြ​ပါ. ​နှမ်း​တစ်​လုံး​ကောင်း​လို့ ​ဆီ​မ​ဖြစ်​နိုင်​ပေ​မယ့်. ​ဆီ​ဖြစ်​လာ​ဖို့​အ​တွက် ​နှမ်း​တစ်​လုံး​တိုင်း​မှာ ​တန်​ဖိုး​ကိုယ်​စီ​ရှိ​ကြ​ပါ​တယ်. ​နှမ်း​တစ်​လုံး​ချင်း​စီ​သာ ​စု​ပေါင်း​မ​ထား​ရင် ​ဆီ​ဆို​တာ ​ဖြစ်​လာ​မှာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး. ​အဲ့​အ​တွက် ​ကျွန်​တော်​တို့​နိုင်​ငံ​မှာ ​ဆီ​ဖြစ်​လာ​ဖို့ ​မိ​မိ​ကိုယ်​ကိုယ် ​နှမ်း​တစ်​လုံး​အ​ဖြစ် ​ခံ​ယူ​ပေး​ကြ​ပါ. ​ဆ​န္ဒ​မဲ​ပေး​ရ​မှာ ​မဲ​တစ်​စောင်​ဟာ ​ဘာ​မှ​မ​ဟုတ်​လောက်​ပါ​ဘူး​ကွာ​လို့ ​မ​ခံ​ယူ​လိုက်​ပါ​နဲ့. ​အဲ့​ဒါ ​နှမ်း​တစ်​စေ့​ပါ​ပဲ. ​မဲ​ပေး​ရာ​မှာ ​မှန်​ကန်​တဲ့ ​စိတ်​ဆ​န္ဒ​နဲ့ ​ရဲ​ရဲ​ဝံ့​ဝံ့​မဲ​ပေး​ပေး​ကြ​ပါ​လို့ ​သ​တိ​ပေး​နှိုး​ဆော်​ရင်း​နဲ့ ​ကျွန်​တော်​တို့​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​လာ​ဖို့ ​အ​ဖက်​ဖက်​က ​တတ်​နိုင်​သ​လောက်၊ ​တတ်​စွမ်း​သ​လောက်​အ​ကျိုး​ပြု​နိုင်​ဖို့​အ​တွက် ​စိတ်​ဓါတ်​ရဲ​ဝံ့​ကြ​ပါ​လို့ ​ဆ​န္ဒ​ပြု​ရင်း​နဲ့ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​လာ​ဖို့​အ​တွက် ​လူ​တိုင်း​မှာ ​တာ​ဝန်​ရှိ​ပါ​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​အ​သိ​ပေး​နှိုး​ဆော်​လိုက်​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော်​လည်း​မဲ​ပေး​ရာ​မှာ ​အ​များ​ပြည်​သူ​တွေ​ရဲ့ ​ဆ​န္ဒ​အ​တိုင်း ​မဲ​ပေး​ဖို့ ​ဆုံး​ဖြတ်​ထား​ပါ​တယ်.
(​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ဆို​တာ​တော့ ​တစ်​ကြိမ်​တော့ ​ရ​တတ်​ပါ​တယ်. ​ရ​တဲ့​အ​ခွင့်​အ​ရေး​ကို ​အ​ကျိုး​ရှိ​ရှိ​အ​သုံး​ချ​တတ်​ဖို့​လို​ပါ​တယ်. ​အ​ခု ​ကျွန်​တော်​တို့ ​နိုင်​ငံ​တော် ​သ​မ္မ​တ​ကြီး​ကိုယ်​တိုင်​က ​လွတ်​လပ်​ခွင့်​တွေ​နဲ့ ​အ​ခွင့်​အ​ရေး​တွေ ​ပေး​နေ​ပါ​ပြီ။ ​ကျွန်​တော်​တို့​လည်း​ပဲ ​ကိုယ့်​ရဲ့​ခံ​ယူ​ချက် ​တစ်​ခု​ကို ​တစ်​စိုက်​မတ်​မတ် ​ယ​တိ​ပြတ်​ဆုံး​ဖြတ်​ချက်​ချ​ပြီး ​မဲ​ပေး​ပေး​ပါ. ​ဆေး​ကျောင်း​မှာ​လို​ပါ​ပဲ. ​ဆေး​ကျောင်း​တက်​ဖို့ ​အ​မှတ်​တစ်​မှတ်​က​လေး​လို​တာ​နဲ့ ​ဆ​ရာ​ဝန်​တော့ ​ဆ​ရာ​ဝန်​ပါ​ပဲ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​တိ​ရိ​စ္ဆာန်​မွေး​မြူ​ရေး​နှင့်​ကု​သ​ရေး(​တိ ​မွေး ​ကု)​ကို​ပဲ ​ရ​လိုက်​တာ​ဟာ ​အ​မှတ်​တစ်​မှတ်​က​လေး​လို​သွား​လို့ ​ဖြစ်​သွား​တယ်​ဆို​တာ​ကို ​မ​မေ့​ပါ​နဲ့။ ​အဲ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​မဲ​တစ်​မဲ​ဟာ​လည်း​ပဲ ​အ​ရမ်း​အ​ရေး​ကြီး​ပါ​တယ်။ ​ပေါ့​ပေါ့​လျော့​လျော့​မ​တွေး​ထား​ပါ​နဲ့။)
phyoaung009 April 1, 2012 at 7:30 PM
​အ​ကို ​စား​ကို​ဖတ်​ရ​လို့ ​ကျ​နော် ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ​ရောက် ​သူ ​အ​နေ​ဖြင့် ​ရင်​တွင်း​ခံ​စား​နေ​ရ​သူ ​အ​နေ​ဖြင့် ​ကိုယ်​နိုင်​ငံ ​ကိုယ့်​ဘု​ရင် ​ကိုယ့်​ဗိုလ်​ချုပ် ​အုပ်​ချုပ်​သူ ​လက်​အောင်​မှာ ​ညီ​ညီ​ညွတ်​ညွတ်​ချစ်​ချစ်​ခင်​ချင် ​နဲ့ ​ပြန်​လာ​ခြင်​တာ ​ကြား​လှ​ပါ​ပြီး ​အ​ခု​ဆို​ရင် ​ထိုင်း​ရောက်​တာ ​ရ ​နှစ်​ရှိ​ပြီး ​ထိုင်း​သူ​ဋ္ဌေ ​တွေ ​အ​တွက် ​သည်​ခံ​မေ​တ္တာ​သုံ​ပြီး​လုပ်​လာ​တာ ​လက်​ရှိ​ဘ​ဝ ​သူ​တို့ ​နိုင်​ငံ ​က ​ကောင်း​တဲ့ ​ပ​ညာ​လဲ​ရ​ခဲ့​သ​လို ​မ​ကောင်း​တာ​လည် ​အ​များ​ကြီး​ကြုံ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ် ။ ​အ​ကို ​ပြော​သ​လို့ ​ကောင်း​တဲ့ ​ပ​ညာ​များ​ကို​ယူ​ပြီး ​ကျ​နော်​တို့ ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​ကြီး ​မှာ ​အ​ကျိုး​ရှိ​ရှိ ​တိုင်​ပြည်​နဲ့ ​လူ​မျိုး​အ​တွက် ​အ​ကျိုး​ကျေု​ဇူ​တွေ ​ပေ​ခြင်​လှ​ပါ​ပြီး။ ​ကျ​နော်​တို့ ​တစ်​အိမ်​ထဲ ​မှာ ​ဘဲ ​က​ရင်​တိုင်​ရင်​သူ​လေ​က ​လည် ​မေး​ကြည့်​တော့ ​သူ​တို့​လည် ​မြန်​မာ​ပြည်​ကြီး ​မှာ ​ကိုယ့် ​ကိုယ့် ​အ​ဖ ​နဲ့ ​ကိုယ့်​လူ​မျိုး​တွေ ​ရှိ​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​တူ​တူ​နေ​ထိုင်း​ခြင်​လှ​ပါ​ပြီး ။ ​အိမ်​ဖော်​မိန်​မ​လေ​တွေ​ဆို​ရင် ​သူ​တို့ ​သူ​ဋ္ဌေ ​အိမ်​က ​အ​တွင်း​ခံ​ဘောင်​ဘီး​တောင်​လျှော်​ပေ ​ရ​လို့ ​ကျ​နော် ​တို့ ​နိုင်​ငံ ​က ​မြန်​မာ​လေး​တွေ ​ထိုင်း​နိုင်​ငံ ​က ​သူ​ဋ္ဌေ ​တွေ​ရှိ​က​နေ ​အ​မြန်​ဆုံ​လွတ်​မြောက်​ပြီး ​ကိုယ်​နိုင်​ငံ ​ကို​ပြန်​ရောက်​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ​လဲ ​ကိုယ့်​လူ​မျိုး ​အ​ခြင်​ခြင် ​ကိုယ်​ခြင်​စာ​စိတ်​လေး​မွေ​ပေ​ပြီး ​ချစ်​ချစ်​ခင်​ခင်​ညီ​ညီ​ညွတ်​ညွတ်​နဲ့ ​တစ်​ယောက်​ကို​တစ်​ယောက်​ကူ​ညီ​စောင့်​ရှောင် ​ကြ​ပါ​လို့ ​ပြော​ပါ​ရ​စေ။ ​အ​ဖုန်း0877138873
shar April 3, 2012 at 4:42 PM
​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​အ​ခု​လို ​ဆို​လာ​တော့ ​ကျွှန်​တော့​ရင်​ဘတ်​ထဲ​မှာ ​အ​တိုင်း​မ​သိ ​ဝမ်း​မြောက်​မိ​ပါ​တယ်...​ကျွန်​တော်​တို့ ​မြန်​မာ​လူ​မျိုး​ဆို​တာ ​ထိုင်း​လူ​မျိုး​တွေ​ထက် ​ဘယ်​တော့​မှေ​အာက် ​မ​ကျ​ခဲ့​ဘူး...​အေး..​ခေတ်​မ​ကောင်း​လို့ ​ဒင်း​တို့​နိူင်​ငံ​မှာ ​ခိုင်း​သ​လောက်​လုပ် ​ပေး​သ​လောက်​ယူ ​ဘ​ဝ​နဲ့ ​ကျွန်​လာ​ခံ​နေ​ရ​တာ ​မြန်​မာ​ဆို​တဲ့ ​အ​မျိုး​နာ​လှ​ပြီ​ဗျ...​ဒီ​ကြား​ထဲ ​ထိုင်း​နိူင်​ငံ ​ရောက်​နေ​ကြ​တဲ့ ​မြန်​မာ​နိူင်​ငံ​သား​တော်​တော်​များ​များ​ဟာ ​မင်း​က ​ဗ​မာ ​ငါ​က​ရ​ခိုင် ​ဒင်း​က​တော့ ​မွန်...​ဒီ​ကောင်​က ​ရန်​ကုန်​သား ​ဟို​င​နဲ​က ​ထား​ဝယ်​သား ​စ​သ​ဖြင့် ​သွေး​ကွဲ​နေ​ကြ​တာ ​တော်​တော်​ဝမ်း​နည်း​ဖို့ ​ကောင်း​တယ်..
​ကျွှန်န်ုပ်​တို့ ​သွေး​ထဲ​တွင် ​စီး​ဆင်း​နေ​သည်​မှာ ​မြန်​မာ​သွေး
​ကျွှန်န်ုပ်​တို့​၏ ​အ​ချစ်​ဆုံး​မှာ ​ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို
​ထို ​ကိုယ့်​ကိုယ် ​သည် ​မြန်​မာ​သွေး​များ​နှင့် ​လှည့်​ပတ်​နေ​သည်
​ထို့​ကြောင့် ​ကျွှန်န်ုပ်​တို့​၏ ​အ​ချစ်​ဆုံး​မှာ ​မြန်​မာ​ပင် ​ဖြစ်​ရ​မည်.....
Ko Naw(WisdomLife) April 6, 2012 at 12:15 PM
kokyaw April 14, 2012 at 6:29 PM
​မ​လွှဲ​သာ​လို့ ​သူ​များ​နိူင်​ငံ​မှာ ​အ​လုပ်​လုပ်​နေ​ရ​ပေ​မယ့် ​ကိုယ့်​နိူင်​ငံ​ကို​ပဲ ​ကိုယ်​အ​ထင်​ကြီး​တယ်..
​အ​ခု​လို ​ပြော​လိုက်​ရ​လို့ ​ကိုယ့်​ကို​ကိုယ် ​အ​ရမ်း​ကျေ​နပ်​တယ်..
Ever November April 23, 2012 at 3:39 PM
​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​တိုး​တက်​လာ​ဖို့ ​လူ​တိုင်း​မှာ ...